स्वरोगार लघुबित्त संस्थाले २६ प्रतिसत लाभांस बितरण गर्ने
काठमाडौं, ११ भदौ । स्वरोगार लघुबित्त बिकास बैंकले २६ दसमलव ३२ प्रतिसत लाभांस दिने भएको छ । बैंकले गत आर्थिक बर्षको खुुद मुनाफा मध्येबाट २५ प्रतिसत बोनस सेयर र कर प्रयोजनको लागि एक दसमलव ३२ प्रतिसत नगद...
काठमाडौं । एन आई सी एशिया बैंक लि. ले यहि २०७४ भाद्र ३० गते विहान ९ बजे कार्की ब्याङक्वेट, बबरमहल, काठमाण्डौ २० सौं बार्षिक साधारण सभा गर्ने भएको छ । यससँगै आ.व. २०७३/७४ को लागि सबैभन्दा अगाडि बोलाउने...
कारोवार रकममा आठ दसमलव ४५ प्रतिसतको बृद्धि (तालिका–सहित)
काठमाडौं, ९ भदौ । यस साता नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा १७५ कम्पनीहरुको कारोबार भएको छ । जस अनुसार ४०१८३ कारोबारबाट तीन अर्ब ३१ करोड ४९ लाख ६५ हजार रुपैयाँ बराबरका एक अर्ब ४८ लाख ३० हजार आठ सय ८० कित्ता सेयर...
अरुण फाईनान्सको १५ करोड रुपैयाँको हकप्रद सेयर बजारमा
काठमाडौं, ६ भदौ । अरुण फाईनान्सको १५ करोड रुपैयाँको हकप्रद सेयरको बिक्री खुल्ला गरेको छ । फाईनान्सले भदौ छ गते अर्थात आज मंगलबारबाट चुक्ता पुंजी १५ करोड रुपैयाँ मध्येबाट एक बराबर एकको अनुपातमा एक सय र...
सात वटै ब्रोकर कम्पनीको रोकिएको कारोवार खुल्ला
काठमाडौं, ६ भदौ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेप्से) ले सात वटा ब्रोकर कम्पनीको कारोवार खुल्ला भएको जानकारी दिएको छ । नेप्सेका अनुसार अघिल्लो दिन सोमबार नेपाल धितोपत्र बोर्डको निर्देशनको आधारम...
लुम्बिनी बिकास बैंकको टोखा शाखामा रक्तदान कार्यक्रम
काठमाडौ, ४ भदौ । लुम्बिनी बिकास बैंक लिमिटेडले रक्तदान कार्यक्रम गरेको छ । बैकको टोखा शाखाले भदौ तीन गते शनिबार लायन्स क्लब इन्टरनेसनलतथा स्थानिय सामाजिक संस्थाहरुसंगको सहकार्यमा टोखानगरपालिका, वडा ...
मध्यान्हसम्म यस्तो रह्यो नेप्से, १३ करोड ५६ लाखको सेयर किनबेच
काठमाडौं, ४ भदौ । मध्यान्हसम्मको सेयर कारोवारको अवस्था हेर्दा नेप्से सामान्य अंकले बढेको देखिएको छ । मध्यान्ह १२ बजेसम्म नेप्से शुन्य दसमलव ८४ अंकले बढेको छ भने सेन्सिटिभ शुन्य दसमलव ३६ अंकले बढेको छ ...
एन.आई.सि.एसियाद्धारा नयाँ निक्षेप योजना प्रस्तुत
काठमाडौं, १ भदौ । नेपालको बैंकिङ्ग ईतिहासमा विभिन्न नयाँ सेवा तथा योजना प्रस्तुत गर्दै आएको यस “एन.आई.सि. एसिया बैंक लि.” ले आफ्नो दुई दशकको सफल यात्राको सुखद उपलक्ष्यमा ग्राहकवर्ग माझ “डबल डिपोजिट”ना...